သူမြားတနျဖိုးထားတဲ့ အသီးကိုမှ စားခငျြကွတဲ့ စနိုကျကွျောလို မိနျးမမြိုးတှကေို ထိထိမိမိ ပွောခလြိုကျတဲ့ မနှေယျထှနျး – Iphone Myanmar
သူမြားတနျဖိုးထားတဲ့ အသီးကိုမှ စားခငျြကွတဲ့ စနိုကျကွျောလို မိနျးမမြိုးတှကေို ထိထိမိမိ ပွောခလြိုကျတဲ့ မနှေယျထှနျး
admin · Posted on May 21, 2022
သရုပျ‌ဆောငျ မနှေယျထှနျး ဟာ MNTV ကထုတျလှငျ့ပွသတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတဈခုဖွဈတဲ့ အိမျမကျမြားမိုးထားတဲ့အိမျ ဇာတျလမျးတှဲမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ပွီး နာမညျကွီးလူသိမြားလာခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။
သူမကိုယျတိုငျ Single Mom ဖွဈပွီး ၁၁ နှဈအရှယျ သားလေးတဈယောကျကို မကျြနှာမငယျအောငျ စောကျရှောကျပေးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ တဈဦးတညျးသောသားလေးအတှကျပဲ အလုပျတှကေိုကွိုးစားလုပျကိုငျနတောဖွဈပွီး စိတျဓာတျကိုလဲ ခိုငျမာအောငျ ထားပါတယျတဲ့။
သူမကတော့ Single Mother တှဆေိုတာ ကဲ့ရဲ့စရာ၊နှိမျစရာလူတနျးစားတှေ မဟုတျပါဘူးလို့ ပွောထားသူတဈယောကျလဲ ဖွဈပါတယျ။သရုပျဆောငျ မနှေယျထှနျး ဟာ လကျရှိမှာ Live sale ရောငျးနပေါတယျ။
ဒီကာလမှာ အဆငျတကယျမပွတေဲ့သူတှမြေားတာကွောငျ့ တဈလကိုနှဈယောကျနှုနျးနဲ့ သူတို့ရဲ့ကုနျပစ်စညျးတှကေို တဈရကျလောကျအခြိနျပေးပွီး အနုပညာကွေးမယူပဲ တဈနိုငျသလောကျကူညီပွီးလိုကျရောငျးပေးတယျ။ Live Sale မှရတဲ့ငှတှေကေို တဈလကို ကလေးအယောကျ၂ဝစာ နို့မုနျ့ဗူးလှူဖွဈပါသေးတယျ။
အခုခတျေက စနိုကျကွျောအရမျးမြားလာပွီလို့ သူမဟာ ထပျမံပွောပွလိုကျပါတယျ။ သူမြားတနျဖိုးထားသောအရာကိုမှ လိုခငျြကွသောမိနျးမမြား၊ သူမြားက ခဈြပါတယျ သူမြားကတနျဖိုးထားပါတယျဆိုမှ လိုခငျြတာ လှတျနတေဲ့သူကို မလိုခငျြကွဘူး။
အဲဒီမလှတျမလပျကိုမှ ကွိုကျတာ၊ အဲ့လိုမိနျးမတှဆေိုတာ တလှဲဆံပငျကောငျးနတောလို့ ချေါတယျဒီယောကျကြားက နငျ့ထကျငါကိုပိုခဈြတယျဆိုတာကို ဂုဏျဖျောနတော ဒါဟာတျောတျောကိုဆိုးဝါးတဲ့ စိတျဓာတျပဲ သူမြားတနျဖိုးထားတဲ့အရာကို ယူလိုကျတော့ရော သူတို့အတှကျ ဘာကောငျးလို့လဲ ….
သူမြားတနျဖိုးထားတဲ့ အသီးကိုမှစားခငျြကွတဲ့ မိနျးမမြိုးတှပေေါလာတယျ စားခငျြရငျဝယျစားကွပါ။လကျထပျခါနီး အမြိုးသမီးလေးတှကေိုလဲ အကွံပေးလိုကျပါသေးတယျ။ လကျထပျခါနီးမှ ဖောကျပွနျလို့ရှကျပွီးငွိမျခံမနကွေပါနဲ့ သူတောငျဖောကျပွနျရဲတာပဲ တဈခါထဲဆဲခလြိုကျလို့ အကွံပေးထားပါတယျ။
ဗမာမိနျးကလေးတှကေ စညျးနဲ့ဘောငျနဲ့နရေတော့ ခံရတာမြားလာတယျ ရိုငျးခိုငျးတာမဟုတျဖူး စညျးထဲကပဲသှားခိုငျးတာ ဘောငျထဲကပဲ လုပျခိုငျးတာ၊ ဒီခတျေမှာဖောကျပွနျဖို့ အကောငျးဆုံးက social media ပါပဲ Facebook password ပေးထားရုံနဲ့ မဖောကျပွနျဖူးမထငျပါနဲ့
အခွား App တှအေမြားကွီးပါပဲ ဒါကွောငျ့ ဖောကျပွနျခငျြတဲ့ယောကျကြားတဈယောကျက ဖောကျပွနျနမှောပါပဲ ယုံကွညျမူ့ဆိုတာ Possword တောငျးတယျဆိုတာနဲ့မပွီးပါဘူး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ လေးလေးစားစား တညျဆောကျရတာပါ။ ငါ့ကိုပဲခဈြပါလို့လဲ သှားပွောလို့မရပွနျဖူး၊ရစေကျရှိသလောကျပေါ့ရှငျ လို့ ပွောသှားပါတယျ။
သရုပ်‌ဆောင် မေနွယ်ထွန်း ဟာ MNTV ကထုတ်လွှင့်ပြသတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အိမ်မက်များမိုးထားတဲ့အိမ် ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး နာမည်ကြီးလူသိများလာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမကိုယ်တိုင် Single Mom ဖြစ်ပြီး ၁၁ နှစ်အရွယ် သားလေးတစ်ယောက်ကို မျက်နှာမငယ်အောင် စောက်ရှောက်ပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးတည်းသောသားလေးအတွက်ပဲ အလုပ်တွေကိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကိုလဲ ခိုင်မာအောင် ထားပါတယ်တဲ့။
သူမကတော့ Single Mother တွေဆိုတာ ကဲ့ရဲ့စရာ၊နှိမ်စရာလူတန်းစားတွေ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြောထားသူတစ်ယောက်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင် မေနွယ်ထွန်း ဟာ လက်ရှိမှာ Live sale ရောင်းနေပါတယ်။
ဒီကာလမှာ အဆင်တကယ်မပြေတဲ့သူတွေများတာကြောင့် တစ်လကိုနှစ်ယောက်နှုန်းနဲ့ သူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို တစ်ရက်လောက်အချိန်ပေးပြီး အနုပညာကြေးမယူပဲ တစ်နိုင်သလောက်ကူညီပြီးလိုက်ရောင်းပေးတယ်။ Live Sale မှရတဲ့ငွေတွေကို တစ်လကို ကလေးအယောက်၂ဝစာ နို့မုန့်ဗူးလှူဖြစ်ပါသေးတယ်။
အခုခေတ်က စနိုက်ကြော်အရမ်းများလာပြီလို့ သူမဟာ ထပ်မံပြောပြလိုက်ပါတယ်။ သူများတန်ဖိုးထားသောအရာကိုမှ လိုချင်ကြသောမိန်းမများ၊ သူများက ချစ်ပါတယ် သူများကတန်ဖိုးထားပါတယ်ဆိုမှ လိုချင်တာ လွတ်နေတဲ့သူကို မလိုချင်ကြဘူး။
အဲဒီမလွတ်မလပ်ကိုမှ ကြိုက်တာ၊ အဲ့လိုမိန်းမတွေဆိုတာ တလွဲဆံပင်ကောင်းနေတာလို့ ခေါ်တယ်ဒီယောက်ကျားက နင့်ထက်ငါကိုပိုချစ်တယ်ဆိုတာကို ဂုဏ်ဖော်နေတာ ဒါဟာတော်တော်ကိုဆိုးဝါးတဲ့ စိတ်ဓာတ်ပဲ သူများတန်ဖိုးထားတဲ့အရာကို ယူလိုက်တော့ရော သူတို့အတွက် ဘာကောင်းလို့လဲ ….
သူများတန်ဖိုးထားတဲ့ အသီးကိုမှစားချင်ကြတဲ့ မိန်းမမျိုးတွေပေါလာတယ် စားချင်ရင်ဝယ်စားကြပါ။လက်ထပ်ခါနီး အမျိုးသမီးလေးတွေကိုလဲ အကြံပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ လက်ထပ်ခါနီးမှ ဖောက်ပြန်လို့ရှက်ပြီးငြိမ်ခံမနေကြပါနဲ့ သူတောင်ဖောက်ပြန်ရဲတာပဲ တစ်ခါထဲဆဲချလိုက်လို့ အကြံပေးထားပါတယ်။
ဗမာမိန်းကလေးတွေက စည်းနဲ့ဘောင်နဲ့နေရတော့ ခံရတာများလာတယ် ရိုင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဖူး စည်းထဲကပဲသွားခိုင်းတာ ဘောင်ထဲကပဲ လုပ်ခိုင်းတာ၊ ဒီခေတ်မှာဖောက်ပြန်ဖို့ အကောင်းဆုံးက social media ပါပဲ Facebook password ပေးထားရုံနဲ့ မဖောက်ပြန်ဖူးမထင်ပါနဲ့
အခြား App တွေအများကြီးပါပဲ ဒါကြောင့် ဖောက်ပြန်ချင်တဲ့ယောက်ကျားတစ်ယောက်က ဖောက်ပြန်နေမှာပါပဲ ယုံကြည်မူ့ဆိုတာ Possword တောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့မပြီးပါဘူး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လေးလေးစားစား တည်ဆောက်ရတာပါ။ ငါ့ကိုပဲချစ်ပါလို့လဲ သွားပြောလို့မရပြန်ဖူး၊ရေစက်ရှိသလောက်ပေါ့ရှင် လို့ ပြောသွားပါတယ်။
ဒီကာလကွီးမှာ ပြျောပါးနတေဲ့ လူတဈစုကို မတ်ေတာရပျခံလိုကျတဲ့ ထားထကျထကျ
တျောလှနျရေးအတှကျ ရမှေနျရဲ့ ပေးဆပျမှုတှေ အခညျြးနှီးမဖွဈစရေဘူးဆိုတဲ့ နိုဗနျထူး